Arbacada, Nofeembar 5, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa in akhristayaasha balooggaygu runtii ay i barteen sannado badan. Shalay waxaan dhajiyay qoraal qoraal ah oo aan ku weydiinayo haddii Obama yahay Vista ku xigta. Waaw, waa maxay dabayl dab kiciyey! Taxanaha faallooyinka ayaa aad uga xumaa dhanka bidix iyo midigta oo waan diiday inaan qoro faallooyin badan. Bloggeygu waa blog Suuq geyn iyo Teknolojiyad, ma aha blog siyaasadeed. Qosolkaygu wuxuu ahaa mid ula kac ah oo